Phakathi ukufomatha umbhalo ngokuvamile isidingo ukwengeza isigaba esisha, kodwa hhayi umucu ongenalutho, okuyinto ifaka umaka isigaba
. Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi udinga ncamashi alondoloze ukufomatha umbhalo langaphambilini, okuyinto ithegi
"sebekubeke" usula. Sivame uhlukanise isigaba ibe izingxenye eziningi, xhumanisa ngokunengqondo.
Ukuze Kwezinye izingxenye umbhalo kwemukelwe isigaba ngezikhawu ejwayelekile zimane okungalungile. Kungenzeka kwakunemibhalo eqoshiwe ngaphansi etitfombeni nakumathebula, izinkondlo, izingcaphuno, imibhalo yaphansi nezikhombo ezinguqulweni amanothi.
(- "ikhefu irowu string" ikhefu irowu) ithegi ekhethekile, umsebenzi elisemandleni kusihloko salo br enikeziwe ukuqalisa uthumele imigqa. khulula ithegi uxhumano yomdwebo ulimi html kusho ukuthi konke okuqukethwe kokulandelayo kufanele uqale umugqa omusha. Uma ufuna, ungakwazi lizoqeda ambalwa ilandelana tags ukufeza isikhawu oyifunayo.
khulula ithegi case sensitive futhi ayidingi ithegi Sengiphetha, ngoba liyisici ezingenalutho, kodwa kungcono ukujwayela uvale wonke tags. Ngo XHTML igebe ithegi kufanele 'uvalwe ivaliwe "phezu udwi.
Isibonelo ithegi igebe
br thengi isinyathelo
Akukho futhi ungalokothi e
Abaphathi abahahayo zidlamlilo
Akukho futhi ungalokothi
Ngineminyaka engu singakabi sibi kangako.
Abaphathi zidlamlilo abahahayo
Isibaluli kuphela has html ithegi
, ngokuthi Sula ( "ukuhlanzeka"). Likhuluma isiphequluli ukuthi wenzeni irowu adluliselwe uma umbhalo ayozithola emhlabeni okuthiwa isici elintantayo, okungase kube, isib, isithombe ihambisane ukuqondanisa attribute amagugu usebenzisa kwesokudla / kwesobunxele, block noma CSS, okuyinto bhalisiwe iflothi impahla.
I ukucaciswa XHTML 1.0 /-HTML 4.01, ungasebenzisa imfanelo kucace zesikhashana kuphela, Frameset futhi , kungenjalo ikhodi kuyoba inoperative.
Izakhiwo ithegi ngemfanelo
Effect lemfanelo ecacile incike ukubaluleka kanye nendawo sokunciphisa umoya lapho zindiza Floating umbhalo isici. Isibaluli kungathatha 4 Amanani:
Ukuze kwesokunxele unqabela ukugoqa isici, kuqondaniswe kwesokunxele, ngakho umbhalo, "ukukhubeka" on the tag
, elise ngezansi kwesithombe yesici elintantayo.
Uqinisile umphumela uyoba ukusetshenziswa yonke i-agumenti, okuyinto owawungeke ubavumele umbhalo ageleze emhlabeni isithombe noma ngakwesokunene noma ngakwesobunxele.
Inani kwesokudla unqabela ukugeleza umbhalo emhlabeni isici, kwesokudla kube ngukulunga, ngakho ngemva ithegi
umbhalo kuyodingeka akukho abangakwenza ngaphandle kokuhlala ukuhambahamba isithombe, egeleza emaceleni awo ngakwesokudla.
Inani noyedwa ( "futhi eyakho noma neyethu") ngokuvamile ususa zonke igunya waba nezimfanelo ecacile, futhi ithegi Khulula buthule wehlela emgqeni.
Inani ezenzakalelayo, ngenxa yalokho, i-imfanelo ithegi, akucacile.
khulula ithegi - ke amahayifeni
Break ithegi umugqa esivumelana kakhulu ukwakha izikhala ezidingekayo emkhatsini wetindzima, ngaphakathi esetshenziswe kuwo njengoba amahayifeni, kodwa hhayi njengendlela ukwehlukana umbhalo ku izigaba.
Akumele kakhulu wathwalwa yizingelosi ithegi ukunqamuka komugqa ukufometha umbhalo, ngoba imiphumela isicelo yayo kungukuthi njalo libhekene obugagu.
Ngokwesibonelo, uma usebenzisa ama-e ithegi ukuze kunqamuke umugqa phakathi ipharagrafu, kungase kuholele ekusebenziseni "inqubo ikamu" ebhokisini umsebenzisi, uma ingaphansi iwindi, okuyinto igxile wewebhusayithi.
IsiZulu Toy Terrier
Kuyini Tartar Sauce futhi French cuisine?